Inkqubela phambili enokuthi ibe nefuthe kwiNtengiso ye-imeyile yakho ngo-14 | Martech Zone
Inkqubela phambili enokuthi ichaphazele ukuThengisa nge-imeyile ngo-14
NgoMvulo, Matshi 2, 2015 Douglas Karr
Ngaphandel ko iitemplate ze-imeyile eziphendulayo, Itekhnoloji engemva kwe-imeyile ayitshintshanga kangako kule minyaka ilishumi idlulileyo. Nangona kunjalo, njengenye yeembuyekezo ezinamandla kutyalo-mali lokuthengisa, abathengisi babona imbuyekezo enkulu xa besebenzisa itekhnoloji ngokuhambelana nomyalezo abawusasazayo.
Nazi izinto ezili-14 eziqhubela phambili kwiTekhnoloji eziChaphazela ukuThengisa nge-imeyile
Ulwenziwo lwexesha lokwenyani isekwe kwidatha enqamlezileyo.
Idatha enkulu imithombo iya kondla umxholo wokuxelwa kwangaphambili kunye nomxholo kwi-imeyile.
Umyalezo odibeneyo amacebo phakathi kwe-imeyile kunye nentengiso yentlalo.
Itegi yexabiso Ukusetyenziswa kwimigca yezihloko ze-imeyile kuyanda.
Ukuphuculwa kwe-HTML Ukunxibelelana nabathengi kuya kuba nefuthe kwindlela esiyila ngayo kunye nokuthumela ii-imeyile.
Intengiso ezenzekelayo izakuqhubeka nokubona ukwanda kwembuyekezo kutyalo-mali.
Iifowuni eziNobuchule zokuSebenza kwimigca yesifundo iya kuvelisa amaxabiso avulekileyo ngakumbi.
Umxholo ophindaphindwayo kunye nokulungiswa komxholo kuya kongeza ixabiso kubabhalisi bakho.
Ujoliso oluncinci ngokwahlulahlulwa kunye nokwenza umntu ngokusekwe komnye umsebenzi wewebhu.
Amaziko Okukhetha iya kubonelela ngokuguquguquka okukhulu kubabhalisi ukunciphisa i-churn.
Abathengi be-imeyile abanjeng iya kuqhubeka ukuqhubela phambili ngokusekwe kwimikhwa ephambili kunye nemikhwa yokufunda.
I-imeyile yokuthengisa iya kwanda ngaphaya koguquko olusezantsi kwefaneli kwaye iya kubonakala yenza umbono kwi umphezulu wefaneli.
Iingxaki zokhuseleko iya kuqhubeka nokuqhubela phambili ukuqinisekiswa kwe-imeyile ngeendlela ezinje I-DMARC.
Wearables iya kuvumela ukufundwa kwee-imeyile ezifuna iipateni zoyilo eziphendulayo ngakumbi.
tags: 2015emazantsi efaneliumnxeba kwisenzoiqhinga lokudibanisa i-imeyilectaimeyile nezentlaloabathengi beimeyileUkubandakanya i-imeyileimeyile hashtagi-imeyile infographicemail Marketingukuthengisa nge-imeyile infographiciimonki ze-imeyileUkulungiswa kwe-imeyileukhuseleko lwe-imeyileImigca yesifundo se-imeyilehashtagsintanethi izintoukuzenzekela ngokuzenzekelayoizixhobo zokuthengisa ezizenzekelayoIcebo lokuthumela imiyalezoUkujolisa kancinciamaziko okukhethaumxholo ophindayoukhuselekoumphezulu wefaneliwearables
Ngaba uyenzile iQhosha lokuFowunela ukuSebenza kuFacebook?
Kutheni iifowuni ezingenayo zibalulekile kuhambo loMthengi wakho